Victor Umeh Enye Ọtụtụ Ndị Ntorobịa Ohere Agụmakwụkwọ n'Efu, Kwàdó Ụmụnwaanyị
Ọ bụ nnọọ oge obi añụrị n'obodo Ojoto dị n'okpuru ọchịchị Idemili South nke steeti Anambra dịka nwa amadi ahụ na-anọchi anya ọgbọ nta nkwàdo Anambra etiti n'ụlọ ọgbakọ omebe iwu sineeti ala anyị, bụ Sinetọ Victor Umeh nyere ụmụakwụkwọ karịrị iri anọ ohere agụmakwụkwọ n'efu ma nye ụmụnwaanyị iri na atọ ego nkwàdo.
Inye onyinye nkwàdo ahụ bụ nke weere ọnọdụ na mmemme ịbàgide n'achụm nta nkwàdo Sinetọ Umeh, bụkwa onye ji aha otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị 'All Progressive Grand Alliance' apụtakwa ịnọchite anya ọgbọ nta nkwàdo ahụ na nhọpụta izùgbe ahụ na-abịa n'ihu n'ala anyị.
N'okwu ya n'oke mmemme ahụ, Sinetọ Umeh kpọpụtasịrị ọtụtụ ihe dị iche o meputagòrò kemgbe ihe erubegị otu ahọ o jiri bughara oche dịka onye nnọchi anya ọgbọ nta nkwàdo ahụ, nke gụnyere ịdọta ka a rụọ mahadum gọọmenti etiti ọzọ, bụ 'Federal University of Education, Agụleri' na steeti ahụ; inye ọtụtụ ndị mmadụ ohere agụmakwụkwọ n'efu; ime ka na a na-etinyezị ndị Igbo n'ihe dị iche iche a na-eme na òtù dị iche iche a na-egùzobe n'ala anyị, tinyere ọtụtụ ihe ndị ọzọ dara ụda o mègoro.
O mere ka a mara na ya esoghị na ndị gara Abụja ịrahụ ụra, kwuo na ya nọ ebe ahụ ịzọta oke ndị ọgbọ nta nkwàdo ya, ndị Anambra na ndị Igbo n'izugbe, ma kpọkuo ndị mmadụ ka ha kwàdo otu ndọrọ-ndọrọ APGA ma tụnyekwara ya na nhọpụta ahụ na-abịa n'ihu, iji mee ka ọ dịgide, bụ ọrụ ọma ahụ na-aga n'ihu ugbu a.
N'okwu nke ya, onyeisi oche otu ndọrọ-ndọrọ APGA n'okpuru ọchịchị Idemili South, bụ maazị Felix Ọbụnadike tòrò ya bụ agụ nwoke maka ọrụ ọma ya, kọwaa na ọnụnọ ya n'Abụja ahụ dị ha ahụ mma, ma kpọkuo ndị obodo niile dị n'ọgbọ nta nkwàdo ahụ ka ha tụnyere ya nakwa otu ndọrọ-ndọrọ APGA na ya bụ nhọpụta ìzùgbe.
N'okwu ha n'otu n'otu, onyeisi ọchịchị obodo Ojoto bụ maazị Edwin Umeghalụ, nke Akwa-Ukwu, bụ maazị Uchenna Anayọ, na nke Ọbà bụ maazị Mike Nwachukwu bunyere Sinetọ Umeh maka ụzọ dị iche iche o sigoro metụ ndụ ụmụ mmadụ aka ọma, ma kwupùtakwa nkwàdo ha n'izùgbe nye ya, dịka naanị ụzọ ha nwere iji kwụghach ya ma sị ya jide ka o ji.